Hungary Inobvumidza Kupinda kune Vakazara Vachirume Vashanyi veRussia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Hungary Inobvumidza Kupinda kune Vakazara Vachirume Vashanyi veRussia
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Hungary Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kubva muna Chikunguru 27, 2020, hurumende yeHungary ichabvumidza zvizvarwa zveRussia zvinobata zvitupa zvekubaiwa zveCOVID-19 kupinda munyika.
Vashanyi veRussia vanofanirwa kuve nevakafanira Schengen visa uye chitupa chekubaiwa.
Mushonga weRussia Sputnik V coronavirus wakanyoreswa muHungary.
Maitiro ekuburitsa Visa haana kuchinjwa.
Vashanyi vanobva kuRussian Federation avo vakabayiwa jekiseni vachipesana neCOVID-19 vachakwanisa kupinda vakasununguka Hangari kutanga nhasi, maererano neshoko repepanhau rakaburitswa neHungary Embassy muMoscow.
“Kubva musi waChikunguru 27, 2020, hurumende yeHungary ichabvumidza zvizvarwa zveRussia zvine zvitupa zvekubaiwa zveCOVID-19 kupinda munyika. Panyaya iyi, vagari vemuRussia vachakwanisa kupinda muHungary vasina zvimisikidzo, vasina mvumo yekuzviparadzanisa nevamwe uye kuongororwa kwePCR, kana vaine vhiza reSchengen rinoshanda uye chitupa chekubaiwa, ”akadaro chirevo.
Sekureva kwemuzinda, maitiro ekuburitsa vhiza haana kuchinjwa. Nekudaro, zvichazodiwa kuti uwedzere chishandiso nechitupa chekubaiwa.
Mushonga weRussia Sputnik V COVID-19 wakanyoreswa muHungary uye urikushandiswa sechikamu chemushandirapamwe wenyika wekudzivirira.
Pakutanga, kuti vashanyire kuHungary, vagari veRussia vaifanira kupa bvunzo mbiri dzisina kunaka dzePCR dzakaitwa mukati memazuva mashanu vasati vapinda nemusiyano wemaawa makumi mana nemasere, kana kupfuura nekuvharirwa kwevhiki mbiri.
Mutevedzeri weMutungamiriri Sangano revashanyi Vanoshanda veRussian Federation Dmitry Gorin achitaura pamusoro pemitemo mitsva yekupinda kwemaRussia muHungary, akasimbisa kuti kuvhurwa kwenyika kuchave kunonzi "green corridor", iyo inogona kusanganisira kubviswa kwezvirambidzo kune dzimwe nyika.